Samabesi khabar | Samabesi khabar - चितवनमा दूधको मूल्य बढाउन गृहकार्य
चितवनमा दूधको मूल्य बढाउन गृहकार्य
प्रकाशित मिति: मंसिर ०१, २०७८
चितवन, १ मङ्सिर । दुग्ध उत्पादक किसानको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी दूधको मूल्य बढाउन गृहकार्य गरिएको छ । विगत तीन वर्षदेखि दूधको मूल्य बढेको छैन ।
दूध उत्पादन गर्दाको लागत पटकपटक बढ्दै गइरहेको तर दूधको मूल्य नबढेको हुनाले दुग्ध उत्पादक किसानहरुले दूधको मूल्य बढाउन दबाब दिइरहेका थिए । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलमा प्रतिलिटर ८ रूपैयाँदेखि १० रूपैयाँसम्म दूधको मूल्य बढाउन सुझाव आएको छ ।
‘बोर्डमा सबै सरोकारवाला निकायबीच छलफल सम्पन्न भएको छ, छलफलमा दूधको मूल्य बढीमा १० रूपैयाँसम्म बढाउन सुुझाव आएको छ, त्यहीअनुसार बोर्डले अध्ययन गर्नेछ’, नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले भने, ‘विगत तीन वर्षदेखि दूधको मूल्य बढेको छैन, किसानको लागत बढिरहेकै छ । किसान मर्कामा नपरुन् भन्ने हिसाबले मूल्य बढाउन सबैबाट पहल गरिएको छ ।’
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको अध्यक्ष डा. राजेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग संघ, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) केन्द्रीय पशुपक्षी सहकारी संघ तथा कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
महासचिव दाहालले भने, ‘सबै सरोकारवाला निकायले दूधको मूल्य बढाउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ, त्यसपछि दूधको मूल्य बढ्छ । दुग्ध विकास बोर्डलाई अध्ययन गर्न केही समय लाग्छ ।’
महासचिव दाहालका अनुसार तीन वर्षदेखि दूधको मूल्य बढेको छैन, यसबीचमा पेट्रोल र डिजेलको भाउ १६ पटक बढेको छ । कर्मचारीको तलब बढ्यो । दाना÷चोकरको मूल्य बर्सेनि बढिरहेको छ । घरभाडादेखि कच्चा पदार्थको मूल्य पटकपटक बढेको छ, तर दूधको मूल्य नबढ्दा बढाउन आवाज उठेको हो । उनले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी दूधको मूल्य बढाउनुपर्ने बताए ।
उनले दूधको मूल्य वृद्धि हुँदा ६९ प्रतिशत किसानलाई र बाँकी ३१ प्रतिशत उद्योगलाई जाने व्यवस्था छ । उनले भने, ‘उद्योग मोटाउन मात्र दूधको मूल्य बढाउन भनिएको होइन, किसानलाई उकास्न पनि हो । धेरै रकम त किसानलाई नै जान्छ ।’
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवले दूधको मूल्य बढाउन सुझाव आएको बताए । उनले भने, ‘दूधको मूल्य बढाउन सुझाव आएको छ, तर तत्काल बढाउन सिफारिस गर्दैनौँ ।’ उनले अध्ययन गरेपछि मूल्य बढ्ने वा नबढ्ने थाहा हुने बताए । उनले भने, ‘आजभोलि नै दूधको मूल्य बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा हामी सिफारिस गर्दैनौँ, दूध उत्पादनमा लाग्ने लागत, उत्पादकत्व सबै अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।’
उनका अनुसार वैज्ञानिक ढङ्गले लामो समय अध्ययन गरेर सन्तुलन मिलाएर मात्र दूधको मूल्य बढ्नेछ । पराल, दाना, चोकरमा मात्र किसानहरु भर पर्दा दूधको लागत बढिरहेको छ ।
जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव किशोर बगाले दूध उत्पादनमा लाग्ने लागत घटाए दूधको मूल्य बढाउन नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लागत घटेकै छैन, दाना र चोकरको भाउ बर्सेनि बढेको छ, परालको भाउ त्यस्तै बढेको छ । दूध उत्पादनमा लागत बढेकै कारण दूधको मूल्य बढाउनु परेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दूधको मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई मर्कामा पार्नुहुँदैन, किसानको दूधको १ रूपैयाँ बढाएर उद्योगी व्यवसायीले १० रूपैयाँ बढाउन मिल्दैन ।’